"နေကောင်းလား .." သူ့ မြန်မာ စကားသံက ပီပီသသ။
"ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျ၊ ဦး က ဗမာလား"။
"မဟုတ်ဘူး၊ အိုင်အမ် စင်ကပူရီယမ်"
"အိုး.. မြန်မာ စကားတတ်နေတာပဲ"
"တတ်တယ်၊ နည်းနည်း တတ်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ စားမယ်၊ ကောင်းဒယ်၊ ဘယ်တွားမလဲ..”။
“Change the song?"
"မပြောင်းပါနဲ့၊ ကျနော် ဒီသီချင်း ကြိုက်တယ်"။
မျုိုးကြီး ကောင်းတယ်၊ ၀ိုင်ဝိုင်း ကြိုက်တယ်၊ လဲဖြူ ကောင်းတယ် ..."။
"Where u got these CDs?”
"ကျော်ကျော်ယံဦး ပေးတယ်"။ (နားထဲကြားရသလို ပြန်ရေးတာပါ၊ မှားနိုင်ပါတယ်။)
“သြော်.. မြန်မာ စကား သူ သင်ပေးတာလား"။
"ဟုတ်တယ်၊ CD တွေ အများကြီး ထပ်မှာထားတယ်"
"ဗမာပြည် အလည် မသွားဘူးလား"။
"အလည် .. visit .."
" Oh.. သွားမယ်။ saving money.. ဈေးကြီးတယ်လို့ ပြောတယ်"။
"အန်ကယ် Can I takeaphoto?"
"Of course, can…" ကျနော် ဖုံးနဲ့ သူ့ ကားလိုင်စင်နံပါတ်နဲ့ သူ့ ပုံကို ရိုက်လိုက်သည်။
ရုံးခန်းရှိရာ လမ်းလျှောက်ရင်း ကျနော့် အတွေးတွေ ပလုံစီ လျက်ရှိသည်။ ကျနော် ဒီ ဦးလေးကြီးထက် ပို၍ သူ့ကို မြန်မာ သီချင်း ချစ်တတ်အောင် ပုံသွင်းခဲ့သော ရွှေအချင်းချင်းကို အလေးပြုချင်နေပါသည်။ "ငဘ" ၀တ္ထု ရေးသော ဆရာကြီး မောင်ထင် ဟာ တရုတ်သွေးပါသည်ဟု ကြားဖူးသည်။ သူငယ်စဉ်က မိဘများက ဘုရားကျောင်းလူကြီးများထံ သွား၍ တရုတ်စာသင်စေတော့ သူကား တရုတ်စာ ကောင်းကောင်းမတတ်ခဲ့၊ လူကြီးတွေတော့ မြန်မာစာတတ်ကုန်သည်ဟု ဖတ်ဖူးသည်။
အတွေးတွေ ယောက်ယက်ခတ်ကာ ရုံးထဲသို့ အ၀င်မှာ ကာယာတီ (Ka Yati) ဟု ကျနော်က နံမယ်ပြောင်ပေးထားသော မလေးအဖွားကြီးက "နောက်ကျားဒယ်'' ဟု လှမ်းအော်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကျိတ်ပြုံး၍ ကျေနပ်နေမိလေသည်။